VaChombo Vanoti Mapurisa Ave Kuronga Kushandisa maComputers muMigwagwa
Gurukota rinoona nezvemukati menyika, Dr Ignatius Chombo nemusi weMuvhuro vakazivisa dare reparamende kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ave kutenga michina yechizvino zvino kana kuti macomputers kuti afambirane nenguva.
Vakatiwo michina iyi ichabatanidza mapurisa nemamwe mapazi ehurumende uye ichaitawo kuti vanhu vakwanise kubhadhara mafaindi avo vachishandisa makadhi avo ekubhanga pamaPoint of Sale.
VaChombo avo vange varikupa humbowo pamusoro pekuwanda kwemapurisa ave kumira mumigwagwa kukomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vati kushandiswa kwemichina kuchaderedza nyaya dzehuwori kumapurisa.
Vatiwo vaye vane mhosva dzekusabhadhara matikiti avo mumigwagwa nedzimwe mhosva vanenge vave kubatwa nemichina iyi pamaroad block.
VaChombo havana kutaura kuti vachashandisa mari yakawanda zvakadii pachirongwa ichi asi vati michina iy ichange ichibatana nemakanzuru, makamabani akaita seEnvironmental Management Agency, ZINARA neZimbabwe Broadcasting Authotrity uye vese vanenge vane mafaindi, mitero kana marezenisi avasina kubhadhara vanenge vave kubatwa nekubhadhariswa mari idzi nemitero yose pamaroad blocks.
VaChombo vatiwo vanoziva kuti pane vamwe vanoshandisa migwagwa vane katsika kekutiza mapurisa vakati vanhu vakaita seivava vanenge vasisakwanise kudarika pamatoll gates kudzamara vabhadhara mari dzese dzinenge dzichidiwa.
Nhengo dzekomiti iyi dzaudza VaChombo kuti hadzisi kufara nenyaya yekuti mapurisa ave kumira mumigwagwa pese pese achibhadharisa vanhu mafaindi ipapo ipao kana kuti maspot fine vachiti zviri kunze kwemutemo.
Asi VaChombo vati zvese zviri kuitwa nemapurisa zviri mumutemo uye vati mamwe maRoadblocks anenge asiri emapurisa asi kuti anenge achiitwa nemamwe mapazi kana makambani ehurumende ayo asingabvumidzwe kumira mumigwagwa ari ega akaita seZBC.
Panyaya yemaspot fines, VaChombo vati mapurisa akatanga kuita izvi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasingabhadhare matiketi avo uye vamwe vaipa nzvimbo dzekugara dzenhema. Vanoti mapurisa ange ari kurasikirwa nemari yakawanda nekutevera vanhu vanenge vachinja pekugara.
Mumwe mugari wemuHarare VaTakudzwa Moyo vati danho riri kutorwa nehurumende rakanaka sezvo richideredza howori kumapurisa.
Mune imwewo nyaya, VaChombo vati bazi ravo richaongorora nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaPhelekezela Mphoko, vakaburitsa muchitokisi vamwe vakuru vakuru vebhodhi rekuZINARA vainge vasungirwa nyaya yehuwori nemapurisa.
Sachigaro wekomiti iyi, VaDexter Nduna vakurudzira VaChombo kuti vaite sekutaura kwavo vachiti vaneta nemakurukota anouya kuparamende achitaura zvinhu zvaasingazoite.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti maroad block awandisa mumimgwagwa uye ave kutokanganisa kuitwa kwemabhizimisi munyika.
Asi VaChombo vati izvi zvinodiwa mukuchengetedza runyanyararo pamwe nekubata mbavha nemakororo.